ဘာများ တတ်နိုင်မှာလဲလို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘာများ တတ်နိုင်မှာလဲလို့ 
ဘာများ တတ်နိုင်မှာလဲလို့ 
Posted by မောင် ပေ on Jun 18, 2011 in Creative Writing | 15 comments
one day တွင် ကျွန်ုပ် မောင်ပေ ပျင်းပျင်း ရှိသည် နှင့် လဘက်ရည် ချို တစ်ခွက် ရယ် စီးကရက် တစ်လိပ် ရယ် နဲ့ဇိမ်ကြ နေစဉ် သကာလ ……။
“ ဂျာနယ် တွေ ရမယ် သတင်းထူး အတင်းထူး တွေ ပါတဲ့ ဟော့ရှော့ ဂျာနယ် တွေ ရမယ် ။ ဒီတစ်ပါတ် သတင်းထူး က တော့ မန်းတလေး က ကိုဘမောင် ရဲ့ ငှက်ပျော ခြံ က ငှက်ပျောသီး တွေ မှာ ကြက်ငှက် တုတ်ကွေး တွေ ပါလို့ ဆိုပဲ …သိချင် ဝယ်ဖတ် တစ်စောင် ၅၀၀ ထဲ ရယ် ”
သို့ နှင့် ညစဉ် အိပ်ယာ မဝင်ခင် ငှက်ပျောသီး နှင့် နွားနို့ ကို နှစ်ခြိုက်စွာ စားသောက်လေ့ ရှိသူ ကျွန်ုပ် မောင်ပေ ခဗျာ ရတက် မအေး လောက်အောင် ဖြစ်သွားပြီး ဂျာနယ် တစ်စောင် ပြေးဝယ် ဖတ်ကြည့် မိလိုက်သည် ။ ဂျာနယ် ပါ သတင်းကျယ် မှာ “ မန်းတလေးမြို့ မှ ခြံစိုက်စားသူ ကိုဘမောင် ရဲ့ ငှက်ပျော ခြံ မှာ ငှက်ပျောသီး များ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင် လျှက် ရှိကြောင်း ။ သို့ သော် ယနေ့ ခေတ်တွင် ကြက်ငှက် တုတ်ကွေး ရောဂါ မှာ လွန်စွာ ဖြစ်ပွား နေကြောင်း ။ ကိုဘမောင် ၏ ငှက်ပျောခြံ တွင်း တွင် လာရောက် ခိုနားကြသော ငှက်ကောင်ရေ မှာ များနေသည် ကို တွေ့ ရကြောင်း ။ ထို့ ကြောင့် ထိုခြံထွက် ငှက်ပျောသီး များတွင် ကြက်ငှက်တုတ်ကွေး ပါမည် မှာ သံသယ ရှိစရာ မလိုကြောင်း တိုင်းသူပြည်သားများ သိစေရန် ရေးသားလိုက်ရကြောင်း ” ဟု ရေးသားထားသည် ကို တွေ့ ရလေသည် ။ အောက်မှာ သတင်းရေးသူ ကို ကြည့်လိုက်တော့ “ တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် ” တဲ့ နာမည် က ။ ဒါနဲ့ ကျွန်ုပ် မောင်ပေ လဲ ငှက်ပျောသီး ကို ဆက်စားရမလား မစားရမလား အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်သွားသည် ။ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေး ဖြစ်မှာ လဲ ကြောက်မိတာ ကိုး ။ ဒီလို နဲ့နောက် ၂ ရက်ခန့် ကြာတော့ ရပ်ကွက်ထဲ သတင်းတွေ ပြန့် လာတယ် ။ အဲဒီ သတင်းတွေ ။ လူတွေ က လဲ ငှက်ပျောသီး ကို သံသယ ရှိလာကြတယ် ။ ငှက်ပျောသီး ရောင်းတဲ့ သူ တွေ ဆိုရင်လည်း တရားခံ ကြီး တွေ လို အကြည့်ခံ ကြရတာ ကို တွေ့ ရတယ် ။မျက်နှာလေး တွေ ကို ငယ်လို့။ နောက် ၃ ရက်လောက်ကြတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ဂျာနယ် လက်ပွေ့သည်လေး ရောက်လာပြန်တယ် …။
“ သတင်းထူး တွေ ပါလာပြန်ပြီ ။ မန်းတလေး မြို့ မှ ခြံစိုက်စား သူ ကိုဘမောင် ရဲ့တရားဝင် ဖြေရှင်းချက် နဲ့ ဟော့ရှော့ ဂျာနယ် ကို တရားစွဲ ရန် ပြင်ဆင်နေခြင်း သတင်း များ ”
ဒါနဲ့ တစ်စောင် ဝယ်လိုက်ပြန်တယ် ။ “ ရိုးရိုးသားသား ပုံမှန်အတိုင်း ခြံ စိုက် စား သူ ကိုဘမောင် အနေဖြင့် သူ့ ငှက်ပျောသီး များ အကြောင်း ဗယုတ်ရေး သူ တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် နှင့် ဟော့ရှော့ ဂျာနယ် တို့ အား ပြန်လည် တောင်းပန် ရန် မဟုတ်မှန်သော သတင်းအတွက် ဖြေရှင်းပေးရန် အကြောင်းကြားထားကြောင်း ။ မဟုတ်ပါက တရားစွဲ သည် အထိ ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟ လာသည် ဟု သိရသည် ။ ထိုအခါ ဟော့ရှော့ ဂျာနယ် က တောင်းပန်စာ ဖြေရှင်းပေးဖို့ အင်းမလုပ် အဲမလုပ် ပေကပ်ကပ် လုပ်နေကြောင်း နှင့် ထိုသတင်း ကို ထည့်သူ တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် ဆိုသူ ကို ဂျာနယ် တိုက် အနေဖြင့် ထိုသတင်း ရေးသူ ကို ယခင် က မသိခဲ့ကြောင်း ၊ ယခု မှ စတင်ရေးသူ တစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ။ သူတို့ ဂျာနယ် တိုက် အနေ ဖြင့် လည်း စောင်ရေ နဲပါး သဖြင့် တစ်ကြောင်း ။ ကြက်ငှက် တုတ်ကွေး နှင့် ငှက်ပျောသီး ငှက် ဆိုသော စကားလုံး ပါပုံ ခြင်း တူနေသဖြင့် ပြည်သူတို့ ၏ ကျန်းမာရေး ကို လွန်စွာ စိုးရိမ် စိတ်ပူ သွားသဖြင့် ရမ်းသမ်း ထည့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ” ရေးသား ထားသည် ကို ဖတ်ရသော အခါ ကျွန်ုပ် မောင်ပေ မှာလဲ လွန်စွာ စိတ်တို သွားသည် ။ ကျွန်ုပ် ၏ နေ့ စဉ် စားနေကြ နို့ ငှက်ပျောပေါင်း မှာ သူတို့ ကြောင့် တစ်ပါတ် ခန့် ပျက်ကွက် သွားရသည် မဟုတ်ပါလော ။ ငှက်ပျောသီးသည် အားလုံး ခဗျာ လည်း ထို သတင်း ကြောင့် တရားခံ ကြီး တွေ လို ထင်မှား ခံ ရတာ တွေ ဘယ်လို ရှင်းကြမလဲ ။ ခက်တော့ ခက်တယ် ဟော့ရှော့ ရယ် ။ မင်းတို့ ကို လည်း အပြစ် မတင် ရက်တော့ပါ ။ သတင်း ဆိုလျှင် စပ်စုပြီး အယုံလွယ်သူ ငါ့ကိုယ် ငါ ပဲ အပြစ်တင် လိုက်တော့ မယ် ဟုသာ ။
အ သူတွေ ခံကြ
ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးဖြစ်နေလို့ ကြက်သားတွေ ရေစင်အောင် ဆေးပြီးတော့ ကြာကြာ ချက်စားပါတဲ့.. ငှက်ပျောသီး တုတ်ကွေး ကြောက်ရင် ရေစင်စင် ဆေးပြီး ကြာကြာချက်စား :D
ပိုကူးစက်လွယ်မှာ အမှန်ပဲ :-) :-) ဘုရားတရားလေးမ မေ့ကြနဲ.ပေါ့….ကိုယ်ပါရောဂါကူးစက်တဲ့အထဲပါသွား
မှားနေပါတယ် ဗျို့ ။ မှန်အောင် ဖြေ နိုင်ရင် မန်းတလေး က ဆိုရင် Dinner ကျွေးမယ် ဗျို့ ။
အဲလို ကြီးပြီးသွားတာ ပုံမမှန်ဘူး။
ဘယ်သူ မှားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ် ဆို တာ သေချာမပေါ်ဘူး။
ဒီကိစ္စ က မန်းလေး မှာ တော်တော် လူသိများပြီး စိတ်ဝင်စားကြတယ်။
ဂျာနယ် တွေ က ရေးထားတာလဲ မမှားနိုင်ဘူး
ဆရာဝန်ကြီးကလဲ သူတို့ဘက်က အကုန်မှန်လိမ့်လို့ မထင်။
ဒီလိုကြီး အဆုံးသတ်သွားတာ…….. ဘာလို့လဲ
ကိုယ် စိတ်ထဲထင်မိသလိုတွေးပြီးမန်းကြည့်မိတာ သိမှမသိတာကို…မန်းအကြောင်းမှန်းမှ မသိတာ မှားတဲ.အခါလည်းမှားပေမပေါ့။ကိုတော်ကာရယ်နေ.လည်ထဲမန်းထားတာကို အမှားပြင်ဆင်ချက်လည်း
မထုတ်ပေးဝူးမသကာပြောရောပေါ့ ရွာသားအချင်းချင်းအိမ်နီးချင်းလို.ထင်ထားတဲ့ ဟာကို :-) :-) :-)
အဖြေမှန်သူ = padonmar ကို Mr BarbeQ တွင် ညစာ တည်ခင်း ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးပါမည် ။ မန်းတလေး က ဆိုလျှင် padonmar အဆင်ပြေမည့် အချိန် ကို windtalker9@gmail.com တွင် ပြောပေးပါ ခင်ဗျာ ။ သို့ မဟုတ် တစ်ခြားမြို့ မှ ဆိုလျှင် နောက်မှ စားမည် ဆိုလျှင်လည်း မန်းတလေး ရောက်သည့်အခါ ဆက်သွယ်ပါ ။ သို့ မဟုတ် ကိုယ်တိုင် မစားချင်သဖြင့် အခြား မန်းတလေး မှ MG ရွာသားရွာသူ တစ်ဦး ကို ပြောင်းရွှေ့ ဧည့်ခံ ပေးပါ ဆိုလျှင် လည်း ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးပါမည် ။ ကိုကား ရေ အဖြေမတိုက်ဆိုင် လို့ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့။နေ့ လည် က အလုပ် ပြန်လုပ် နေရလို့ အွန်လိုင်း မတက် ဖြစ်လို့ ပါ ။ နောက်ကိုလည်း ဒီလို အစီအစဉ် လုပ်ပေးပါဦးမယ် ဗျာ ။
padonmar ကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ မေးလ် လိပ်စာ ကို လည်း ဒီမှာ ဖော်ပြ ပေးပါ လို့ လည်း တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော် ။ ကျွန်တော် ရဲ့ လိပ်စာကို ဆက်သွယ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ။
ကိုပေရေ၊မန်းလေးတော့ မလာနိုင်သေးဘူး၊အန်တီက မန်းလေးသူဟုတ်ဘူးကွယ်၊:D
အဲဒါပေမယ့် မန်းလေးမှာ အကိုကြီးကိုပေါက် ရှိတယ်လေ။သူ့ကိုကျွေးလိုက်နော်။
သူရန်ကုန်လာမှ နှစ်ဆ ပြန်ကျွေးခိုင်းလိုက်မယ်။:D
အန်တီပဒုမ္မာရေ ကိုပေါက်က သူစားထားမိလို့ ရန်ကုန်လာရင် ယိုကျွေးမယ်တဲ့ ….ဟဲ….:)
ကျွန်တော်လဲ အဲဒီအကြောင်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်…… ကျွန်တော်သာ မန်းဒလေးမှာရှိရင် လူနာရှင်ရော ဆရာဝန်ကြီးပါ သွားပြီး အင်တာဗျူးချင်တယ်…. တကယ်မဟုတ်ရင် .နိင်ငံပါ သိက္ခာကျတယ်…ဟုတ်နေရင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ…
သတင်းအမှန်လေးများရရင် တင်ပေးပါအုံး ဗျာ……….
ဒါဆိုလည်း အန်ကယ်ပေါက် ရေ သား ကို ဆက်သွယ်ပါနော် ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဂုဏ်ပြု ဧည့်ခံပွဲ ကို အန်တီpadonmar က အန်ကယ်ပေါက် ကို လွှဲပေးပါတဲ့ ။
ဂျာနယ်တွေကလည်း ရောင်းကောင်းအောင် တခါတလေ ဖွတတ်ပါတယ်။ သူကြီးကလည်း တခါတလေ ပွဲကောင်းအောင် ဆွ တတ်ပါတယ်။
ဟုတ်ဖူး။ဦးရှံစားဖြစ်သွားဘီ။ :D :D :D